पहिलो त्रैमासमा लक्ष्मी बैंकको नाफा घट्यो, प्रतिशेयर आम्दानी पनि घट्यो
कात्तिक २८, काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा २२ दशमलव २८ प्रतिशत कमी आएको छ । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ४० करोड १९ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३१ करोड २३ लाखमा सीमित भएको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । सो अवधिमा कम्पनीको नाफा घटेसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. १८ दशमलव ०२ रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. १२ दशमलव ७३ मा सीमित भएको हो । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको वितरण योग्य नाफा रू. ३ करोड २४ लाख रहेको छ ।
चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ८१ करोड रहेको छ भने जगेडा कोषमा रू. ३ अर्ब ३६ करोड र रिटेन्ड अर्निङमा रू. १ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी सञ्चित गरेको हो । त्यसैगरी कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात १९ दशमलव ९५, तरलता अनुपात २० दशमलव २६ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४९ दशमलव २२ रहेको छ ।